मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको भोलिपल्टै खुल्यो गोकुल बास्कोटाको अर्को डरलाग्दो पोल ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको भोलिपल्टै खुल्यो गोकुल बास्कोटाको अर्को डरलाग्दो पोल !
admin February 21, 2020 February 21, 2020 समाचार	0
सञ्चारमन्त्री हुँदा गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र भूउपग्रहको काममात्र अगाडि बढाएनन् नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा समेत आफ्नो स्वार्थ देखाए । यी कार्यका लागि उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफू अनुकूलका अधिकारीलाई नियुक्त गरे । अरबको मरभूमी सयर गर्दै नियुक्तिमा पनि डिल भएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको लागत २६ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ४२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो ।
यसमा मात्र १६ अर्बको चलखेल देखियो । टेपकाण्डमा समेत पौने एक अर्बको कमिशनको विषय स्पष्ट सुनिएको छ जुन स्वीस कम्पनिका एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँगको कुराकानी हो । तर, स्वीस कम्पनिले नभई फ्रान्स र जर्मनीको कम्पनिले पाए । भू-उपग्रहको काम अमेरिकी कम्पनिहरुले १२ अर्बमा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बाँस्कोटाको दबाबमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० अर्बमा ठेक्का दिने प्रक्रिया बढाए । यसबाट १८ अर्बको चलखेल भयो ।
नग्न अवस्थामा मृत रिना प्रकरणः नालायक प्रसासनकै कारण सडकमै बल्यो टायर… भिडियो हेर्नुस्